Home » Vaovao momba ny dia lavitra mahandro sakafo » Miarahaba an'i Chef Executive vaovao ny High Hampton Resort
Benchmark dia nanendry an'i Sean Ruddy chef mpanatanteraka ho an'ny High Hampton Resort, any Cashiers, North Carolina. Ny fialan-tsasatra dia fananana Benchmark Resorts & Hotels®. Tom Garcia, filoha lefitra ary mpitantana jeneraly an'i Benchmark, no nanao izany fanambarana izany.
"Faly be aho mandray an'i Sean any amin'ny High Hampton Resort" hoy Andriamatoa Garcia. “Mampifangaro ny fitiavany mahandro sy ny fankasitrahany lalina ny zava-dehibe ilain'ny sakafon-tsakafo amin'ny fiainan'ireo vahininay miaraka amin'ny fitiavany lehibe ny atsimo sy ireo tsiro tsy manam-paharoa ao amin'ny faritra.”
Chef Sean Ruddy dia chef mpanatanteraka ho an'ny Greystone Inn an'ny Lake Toxaway, North Carolina. Nandritra ny fotoana nijanonany tany, ny trano dia nomena anarana lisitra malaza nataon'i Conde Nast Traveler momba ny toerana Top 15 hipetrahana any Etazonia, ary nahatratra ny toeran'ny diamondra efatra.
Sean Ruddy dia nanomboka ny asany nahandro tamin'ny fahazazany 15 taona niasa tapa-potoana tao amin'ny trano fisakafoanana mandre ny tranony. Nahazo diplaoma avy amin'ny Florida Culinary Institute any West Palm Beach izy taorian'ny fianarany tamin'ny lisea. Taorian'izany dia nifindra tany Karaiba tany amin'ny Nosy Cayman izy, izay novolavolaina ny fahalalàny amin'ny fampifangaroana ny tsiron'ny kolontsaina isan-karazany sy ny fampiasana akora sy zava-manitra avy any an-toerana. Nahavita ny fianarany momba ny fahandroana tao amin'ny Culinary Institute of America any St. Helena, Kalifornia.
"Tiako ny maka fomba fandrahoan-tsakafo avy amin'ny faritra maro samihafa ary mitondra izany any atsimo," hoy i Chef Ruddy, izay manondro ny fomba fandrahoan-tsainy ho New South Masakan. "Ny fitiavana mahandro dia fihetsika fitiavana ary mila fikasihana manokana mba hahasarika ny olona rehetra." Sean Ruddy dia monina any Toxaway, North Carolina.